“Waxaan ka mudaaharaadaynaa dadkayaga lagu laynayo Buuhoodle illa Kalshaale” Mudaaharaad Garowe. – Radio Daljir
“Waxaan ka mudaaharaadaynaa dadkayaga lagu laynayo Buuhoodle illa Kalshaale” Mudaaharaad Garowe.
Garowe, Feb 20 – Mudaaharaad looga soo horjeedo colaada ka aloosan gobollada Sool & Cayn, laguna dhaliilay kaalinta dawlada Puntland ayaa maanta ka dhacay caasimada Puntland ee Garowe. Banaanbaxayaasha ayaa si caro leh uga hadlay dagaalka joogtada ah ee ka socda balliga Kalshaale iyo meelo kale oo ka mid ah gobolka Cayn.
Banaanbaxyaasha ayaa isugu soo baxay barxada weyn ee magaalada Garowe oo ay hadalo ka jeediyeen qaar ka mid ah dadka banaanbaxayey.
Waxaa ay ku eedeeyeen Somaliland in ay colaad hurinayso, ayna wadato qorshe dhulbalaarsi.
Waxaa ay eedayn u soo jeediyeen dawlada Puntland oo ay sheegeen in ay aanay kana hadal, waxna ka qaban dagaalka Kalshaale.
“Waxaanu ka mudaaharaadaynaa dadkayagu lagu laynayo Buuhoodle illaa Kalshaale …maatida ay ku soo duushay Somalidiidka uu u taliyo Siilaanyo” ayaa ay tiri mid ka mid ah dadkii ka hadlay barxada Garowe.
“Haddii dawlada Puntland ay keeni weydo garab iyo gaashaan, shacabka ayaa dhaqaaqaya, rag iyo dumar.” ayaa ay tiri mid ka mid ah dadka mudaaharaaday.
“Annagu dawlada Puntland weli cid kama hayno …Siilaanyo waxaa uu rabaa in uu dalkayaga iyo dadkayaga afduub ku qabsado, mana aanaan ogolin” ayaa ka mid ahaa erayada ay tiri mid ka mid ah dadka mudaaharaaday.
“Waxaan u arkaa dagaalka Kalshaale in uu yahay beel beel ku soo duushay, oo beeshaasina ay adeegsanayso hab dawladeed” ayuu yiri banaanbaxe kale.